Mikatona Indray ny Aterineton’i Iràka ho Fisorohana ny Hosoka amin’ny Fanadinana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 24 Febroary 2017 4:33 GMT
Fanapahana ny Aterineto ao Iraka araka ny fanadihadiana nataon'i Dyn teo anelanelan'ny 1 ka hatramin'ny 6 Febroary 2016
Tao anatin'ny telo taona nisesy, nampiasain'ny manampahefana Irakiana ny fanakatonana ny Aterineto mba hisorohana ny mpianatra tsy hangala-tahaka amin'ny fanadinana. Nahita fahatapahana miisa efatra ny vondrona Tambajotra mpanao fanaraha-maso Dyn Research teo anelanelan'ny 1 ka hatramin'ny 6 Febroary. Manomboka eo amin'ny manodidina ny amin'ny 8:30 ora any an-toerana ireo fanapatapahana ireo ary maharitra ora iray.
Ny fahatapahan'ny Aterineto telo goavana tao Iraka tao anatin'ny 3 andro farany . Maharitra eo amin'ny ora iray avy eo.
Ny fahatapahana adiny iray, dia natao mba hanakanana ireo mpianatra tsy hangala-tahaka amin'ny fanadinana hisondrotana kilasy faha-6, ary haharitra mandritra ny herinandro izany, hoy ny Minisiteran'ny Fifandraisandavitra Irakiana araka ny fampitam-baovao ao an-toerana . Lasa mahazatra ao Iràka ankehitriny ny fanakatonana sy ny fanapatapahana ny Aterineto mba hisorohana ny hosoka amin'ny fanadinana .
Nahoana isika no mbola manao izany ihany?
Tamin'ny herintaona, nanakatona ny hosina tao amin'ny firenena im-polo tamin'ny volana May ny governemanta Irakiana, tao anatin'ny fahatapahana izay naharitra ora telo isa-maraina. Tamin'ny volana Aogositra ary tamin'ny Oktobra ihany koa, nampiasa io tetika io ihany ny governemanta mba handraràna ireo mpianatra tsy hifraody mandritra ny fanaovana fanadinana. Hita tamin'ny fahavaratry ny taona 2015 ny fanapahana toy izany..
Amin'ny rafi-pampianaram-panjakana ao Iraka, betsaka ny olana mandritra ny fanadinam-pirenena, izay matetika tena manan-danja amin'ny hoavin'ny tanora Irakiana.
Nanoratra i Doug Madory, Talen'ny Fanadihadihana ny Aterineto ao amin'ny Dyn :
Ao anatin'ny fampianaram-panjakana ao Iraka, raha tsy mahazo naoty ambony amin'ny fanadinana fisondrotana kilasy faha-6 ny mpianatra , dia mifarana hatreo ny fampianaram-panjakana ho azy ireo ary mety ho sarotra kokoa ho azy ireo sahady noho izany ny hoaviny. Izany no mahatonga ny fanadinana tena zava-dehibe amin'ny hoavin'ny mpianatra Irakiana, hany ka manao izay tratrany ireo ray aman-dreny indraindray mba ahazoana tombondalana amin'ny fifaninanana, mba hitohizan'ny fianaran'ny zanany.
Mety hanampy amin'ny fanazavana ny antony mahatonga ny governemanta Irakiana vonona ny handeha lavitra hatrany amin'ny fanakatonana ny tambajotra izany mba hisorohana ny hosoka amin'ny fanadinana. Kanefa izany tsy manome rariny ity paikady ity, indrindra fa mitombo hatrany ny fankatoavana ny fidirana amin'ny aterineto ho zo fototra. Tamin'ny vola Jona lasa teo, nanangana ny vahaolana tsy voatery arahina manameloka ny “fepetra iniana atao mba hisorohana na hanakorontanana ny fahazoana miditra na ny fanapariahana ny vaovao an-tserasera” ny Filankevitry ny Firenena Mikambana misahana ny Zon'olombelona , sady nilaza “fa tsy maintsy arovana an-tserasera ihany koa ny zon'ny olona ivelan'ny aterineto mitovy amin'izany, indrindra ny fahalalahana maneho hevitra. “
Tonga izao fanapahan-kevitra izao rehefa nitohy tamin'ny taona 2016 ny fahatapahan'ny aterineto manerantany nahitan'ny Access Now fanakatonana miisa 56 .
Manerana ny faritra Arabo, miampy an'i Iraka, hita any Alzeria, Bahrain, Ejipta, Libya, Sodana, Syria sy Yemen ihany koa ny fanapatapahana. Tamin'ny fotoana mafana farany, nanapaka ny Aterineto finday ny governemanta Alzeriana mba hisorohana ny fanaovana hoso-panadinana sy ny famoahana an-tsokosoko ny lazaolana Bakalaoreà. Nanakana ny fidirana amin'ny Aterineto finday ho an'ny mpisera mihoatra ny 15 tapitrisa ny hetsika, kanefa izany tsy nahasakana ny fiporitsahan'ny lazaolana tao amin'ny media sosialy, izay nanery ny Minisiteran'ny Fampianarana hamerina indray ny fanadinana tafaporitsaka. Etsy ankilany, ao amin'ny tanànakelin'ny hetsi-panoherana Bahrainita ao Duraz, ” ninia nanapatapaka ” ny tolotra an-tariby sy ny aterineto finday ireo mpanome tolotra aterineto, nanimba ireo raharaham-barotra tamin'ny asany ary nahatonga fatiantoka ho an'ny harin-karena faobe tao amin'ny firenena izay mihoatra ny 1,2 miliara dolara Amerikana tao anatin'ny valo andro, araka ny fanadihadihana Brookings .
Mampiseho ny toe-javatra tao Alzeria sy Bahrain fa tsy vitan'ny hoe tsy misy dikany fa tena manimba zavatra ihany koa ny fanakatonana aterineto. “Manimba ny olona rehetra ireny”, ary “tsy manavotra ireo lasibatra na mamerina izany amin'ny laoniny indray,” araka ny fanamarihan'ny Access Now. Kanefa hita fa mbola tsy miraika amin'ny zava-misy. ny governemanta Irakiana sy ny fitondram-panjakana tompon'andraikitra amin'ny fanakanana ny aterineto sy ny fanapatapahana.